Izindaba - Indima yetape yesipanji ye-EPDM emikhiqizweni yesipanji emelana nokushisa namasu wokusebenzisa
Injoloba ye-Butyl inokungena okuphelele kwegesi nokumelana nokushisa, futhi isetshenziswa kakhulu ekukhiqizeni imikhiqizo enjoloba emelana nokushisa okuhlukahlukene, imikhiqizo enjoloba yesiponji emelana nokushisa ingenye yazo. Abakhiqizi abaningi bokucubungula amashubhu bangaphakathi bayazi ukuthi inqubo yokucubungula ityhubhu yangaphakathi izokwengeza inani elifanele lenjoloba ye-EPDM noma injoloba esetshenzisiwe kabusha, inhloso ukunweba impilo yenkonzo yethubhu yangaphakathi ye-butyl. Ngakho-ke kuyadingeka yini ukwengeza injoloba ye-EPDM lapho usebenzisa imikhiqizo ye-butyl yerabha eluhlaza okwehlisa ukushisa kwemikhiqizo yenjoloba? Uma kunjalo, yiziphi izingqinamba okufanele zaziwe lapho kufakwa?
1. Indima yerabha ye-EPDM emikhiqizweni yesiponji emelana nokushisa kwe-butyl
Injoloba ye-EPDM / irabha esetshenzisiwe kabusha ngemuva kobulukhuni bokuguga, imikhiqizo yenjoloba ye-butyl izoba ntofontofo futhi inamathele ngemuva kokuguga, ngakho-ke ukusetshenziswa kwesamba esifanele se-EPDM irabha emikhiqizweni yerabha ekwazi ukumelana nokushisa yesiponji kungenza ukukhubazeka kwenjoloba ye-butyl, kuthuthukise ukusebenza kwemikhiqizo ye-butyl emelana nokushisa kwesiponji.
I-EPDM injoloba / irabha esetshenzisiwe kabusha nenjoloba yebutyl, ukumelana nokushisa okuphezulu, ukumelana nokuguga (ikakhulukazi ukumelana ne-ozone) kunenjoloba ye-butyl; Imikhiqizo ye-butyl emelana nokushisa kwesiponji esilinganisweni esifanele senjoloba ye-EPDM ingathuthukisa ukumelana nokushisa kwemikhiqizo ye-foam, ukumelana nokuguga, ukuqhubeka nokwelula impilo yensizakalo yesipanji esimelana nokushisa.
2. Imikhiqizo yesipanji emelana nokushisa kwe-Butyl kumakhono wokukhetha injoloba ye-EPDM
Ukusetshenziswa kwempahla yenjoloba ye-EPDM ukwenza ngcono ukusebenza kwemikhiqizo yesipanji emelana nokushisa, kusuka ezindlekweni zokusebenzisa injoloba eyenziwe kabusha ye-EPDM. Inhlanganisela yenjoloba engavulwanga ye-EPDM noma imfucumfucu yemikhiqizo yenjoloba ye-EPDM iphinde isetshenziswe futhi yenziwa kabusha injoloba ye-EPDM ephezulu futhi ephansi yokushisa, izakhiwo zokulwa nokuguga ne-EPDM injoloba ngokufanayo iyafana, intengo iphansi kakhulu kunerabha yokuqala ye-EPDM, futhi ukuhambisana kwenjoloba ye-butyl kungcono, ingathuthukisa ukusebenza okuphelele kwemikhiqizo yesipanji emelana nokushisa ngaphansi kwesisekelo sokunciphisa izindleko zempahla eluhlaza. Okwezakhiwo zomzimba nezomshini zezidingo eziqinile zesipanji esimelana nokushisa 2LLYY422-SJ imikhiqizo, abakhiqizi bemikhiqizo yenjoloba bangaxubaniswa nenani elifanele lenjoloba ye-EPDM erabha le-butyl ukuqinisekisa ikhwalithi yomkhiqizo.
3. Ungayishintsha kanjani i-EPDM injoloba nejubane le-butyl rubber vulcanization
Njengoba sonke sazi, ukuvuthwa kwemikhiqizo yenjoloba yesiponji nokwenziwa amagwebu kwenziwa ngasikhathi sinye, isivinini se-vulcanization kunesivinini esinamagwebu noma esisheshayo kunejubane elenza amagwebu sizothinta umphumela okhihlizayo wemikhiqizo ekhihlizayo nokusebenza kahle kwegwebu; ukusebenza kwe-butyl raber kanye ne-EPDM yerabha ye-vulcanization, izimo ze-vulcanization zihlukile, ngakho-ke abakhiqizi bemikhiqizo yenjoloba kumele babe ukwakheka okufanele kohlelo lwe-vulcanization ukuqinisekisa ukuthi i-vulcanization ne-foam ngesikhathi esisodwa. Ngokuvamile, abakhiqizi bemikhiqizo yenjoloba bangakhetha isulphur vulcanization, kusetshenziswa i-accelerator yerabha i-DM, ukusetshenziswa kwe-foam foam ejenti ye-OBSH, ukuxhumana okungcono phakathi kwejubane le-vulcanization nejubane le-foam.
Ukusetshenziswa kwenjoloba eyenziwe kabusha ye-EPDM noma injoloba ye-EPDM ukwenza ngcono ukusebenza nempilo yemikhiqizo yesiponji emelana nokushisa esephelile ye-butyl, abakhiqizi bemikhiqizo yenjoloba nabo badinga ukulungisa kahle uhlobo nenani lamanye ama-ejenti afanayo kwifomula, ungasebenzisa i-semi ukuqiniswa kwe-carbon black reinforced, ukuthambisa u-oyela upharafini, i-parafini wax anti-ukuguga, kanye nokusetshenziswa kwe-zinc oxide, i-stearic acid ne-magnesium oxide, ukuqhubekisela phambili ukuthuthukisa imikhiqizo ye-butyl / EPDM yerabha emelana nokushisa kwesiponji imikhiqizo ephelele Ukusetshenziswa kwe-zinc oxide , i-stearic acid ne-magnesium oxide ingaqhubeka nokuthuthukisa ukusebenza nokuphila kwensizakalo yemikhiqizo yesipanji emelana nokushisa kwe-butyl / EPDM.